Igbo, John: Lesson 007 - Onye Baptizim na-akwadebe ụzọ nke Kraist (Jọn 1:6-13) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 007 (The Baptist prepares the way of Christ)
11 O biakutere nke aka Ya, ma ndi nke aka Ya akpọbataghi Ya. 12 Ma ka ha ra, bú ndi natara Ya, O nyere ha ike ighọ umu Chineke, bú ndi kwere n'aha-Ya:13 ndi amuru, ọ bughi site n'ọbara, ọ bughi kwa site n'ọchichọ anu-aru, ọ bughi kwa site n'ọchichọ nwoke, kama nke Chineke.
Ndị Agba Ochie bụ nke Chineke n'ihi na Onyenwe anyị kekọtara onwe ya nye ndị mmehie a site n'ọgbụgba ndụ mgbe ha mesesịrị ha ọcha. O duziri ha ruo ọtụtụ narị afọ. O jiri iwu kwadoro ha maka agha nke Ozi. N'ụzọ dị otú a, akụkọ ihe mere eme nke ụmụ Abraham banyere ọbịbịa nke Kraịst. Ọdịdị ya bụ ihe mgbaru ọsọ na nzube nke Agba Ochie.
Ọ bụ ihe dị ịtụnanya na ndị ahụ a họọrọ ịnabata Onyenwe anyị Jizọs jụrụ ya ma ha anataghị ìhè ya. Ha choro ibi na ochichi nke iwu, na-eme ngwa ngwa na ikpe. Ya mere ha hapuru amara kpamkpam ma hu oru nke aka ha karia nzoputa nime Kraist. Na ha echegharịghị, ma obi tara mmiri onwe ha megide mmụọ nke eziokwu.
Ọ bụghị nanị ndị Agba Ochie bụ ihe onwunwe nke Chineke, kamakwa mmadụ nile n'ihi na Onye Pụrụ Ime Ihe Niile mere nkume, osisi, anụmanụ na ọbụna ụmụ mmadụ nile. N'ihi nke a, ndị dị iche iche nke ụwa na-ebu otu ọrụ dịka ndị Agba Ochie. Onye Okike anyị na Onye nwe anyị chọrọ ịbanye n'ime obi na n'ụlọ anyị, ya mere, ndị ga-anabata ya? Ị bụ nke Chineke. Ị tinyere onwe gị n'ọnọdụ Onyenwe gị? N'ụzọ dị mwute, taa ọtụtụ ndị mba adịghị njikere imeghe ìhè nke Kraịst. Ha achọghị ka ihu igwe ya nwee ike imeri idi ike nke ọchịchịrị ha. N'ụzọ dị otú a, ha na-ajụ Ọkpara Chineke ọzọ n'oge anyị.
Onye obula nke nkpuru Abraham ma obu nke madu n'ozuzu ya meghere obi ya nye Kriast ma nye onwe ya n'aka aka nke onye nzoputa di ike, onye ahu genwe oke ebube. N'ihi na ìhè nke eluigwe ga-eme ka ìhè ya doo ya anya ma merie ọchịchịrị nke dị n'obi ya. Ọzọkwa, ike Chineke ga-abata n'obi ya ma mee ka obi ya dị ọhụrụ. Kraist naputa gi site n'ohu nke nmehie ma mee ka i banye n'ime nnwere onwe nke umu Chineke. Ọ bụrụ na ị hụrụ Kraịst n'anya, mgbe ahụ mmụọ nsọ ga-ebi n'ime gị ma malite ọrụ nzọpụta ya na ndụ gị.
Ugbu a, onye nkwusa ozioma Jọn ekwughị na anyị ga-abụ ma ọ bụ na anyị aghọwo ụmụ Chineke, kama na ugbu a, anyị na-aghọ ụmụ ya, na-eto eto n'ụzọ ime mmụọ. Anyi chotara ihe abuo n'etiti okwu ndi a, n'ihi na onye kwere na Kraist, n'otu uzo, abanye n'ime ndu ohuru, ma n'aka nke ozo, o malite kwa usoro nke mmepe na ibuwanye oke n'ime ndu ime mmuo ya. Ike nke Onyenwe anyị kere anyị dịka ihe ọhụrụ e kere eke, otu ike a ga-edokwa nsọ ma mee ka anyị zuo okè.
Anyị aghọbeghị ụmụ nke Chineke naanị site na ịmalite, ma anyị ghọrọ ụmụ site na ime mmụọ. Mkpụrụ nke Mmụọ nke Kraịst n'ime obi anyị pụtara na anyị ejupụtawo n'ikike nke Onyenwe anyị. Nwepu nke ikike nke Chineke dika ndi kwere ekwe nekwu na odigh ike n'uwa ma obu na njedebe nke oge nwere ike igbochi ha ibu ndi juputara n'omume omume Chineke. Kraist bu onye dere okwukwe na onye zuru oke.A pụghị iji ụmụ Chineke na ụmụaka nke ụwa tụnyere ibe ha. A mụrụ anyị site n'aka nne na nna abụọ mụrụ anyị site na mgbochi ha ma ọ bụ site na atụmatụ ha. Ma eleghị anya, ha na-ekpekọ ekpere ọnụ, na-erubere nduzi nke Mmụọ Nsọ. Mana ihe nketa ime mmụọ, nke uche ma ọ bụ nke anụ ahụ site n'aka nne na nna anyị enweghi mmekọrịta na ọmụmụ ọzọ anyị sitere na Chineke. N'ihi na ime mmuo nke ime mmuo di nso site na nmalite ma sitere na Chineke, onye esitere n'aka ya muru Onye obula n'eme. N'ihi na ọ bụ ezi Nna nke ime mmụọ anyị.
Enweghị nwa nwere ike ịmụ nwa. A mụrụ ya, n'ụzọ dị otú a, ọmụmụ ime mmụọ anyị bụ amara dị ọcha. Kraist nagha nkpuru nke ozioma ya nime obi ayi. Onye hụrụ mkpụrụ osisi a n'anya, nabata ha ma debe ha. N'ime ya ndụ ebighị ebi nke Chineke ga-eto. Ngọzi nādiri ndi nānu okwu Chineke, debe ya.Ọmụmụ n'ime ọmụmụ Ndị Kraịst na mkpakọrịta nke Ndị Kraịst anaghị eme ka anyị bụrụ ụmụ nke Chineke, kama ọ bụ naanị okwukwe na aha Kraịst. Okwukwe a pụtara ịbịaru ya nso, imikpu onwe ya n'àgwà ya, nghọta ya ịdị nwayọọ na-eto eto na ịdabere n'ike ya. Ọganihu a na-eme ruo mgbe anyị nyefere onwe anyị n'aka ya, na-eche na ọ na-azọpụta anyị ma na-agbanwe anyị n'oyiyi ya. Okwukwe nke Kraist bu ihe di n'obi ayi na ya, na nkwa ebighebi. A gaghị emezu ọmụmụ ime mmụọ n'ime anyị ma ọ bụghị site n'okwukwe a, ka anyị wee nwee ike ikwu na ịmụ mmadụ ọzọ abụghị nnukwu ma ọ bụ sie ike karịa okwukwe, dịka okwukwe adịghị dị ala ma ọ bụ dị mfe karịa mmeghari ohuru. Ha bụ otu.Onye nkwusa ozioma John ekwugh aha ya Jisos Kraist tupu ya abia. Kama nke ahụ, ọ kọwaara ndị kwere ekwe si mba dị iche iche àgwà ya, na-eji okwu ndị dị nso n'echiche ha. Ị ghọtara ihe isii pụtara site na àgwà ndị a nke Kraist na onye nkwusa ozioma ga-aga chọọchị ya? Ị mepeela obi gị n'àgwà ndị a ma kpọọ isiala nye ha? Mgbe ahụ, ị ga-aghọ n'ezie nwa nke Chineke!
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ana m akpọrọ gị isiala ma hụ gị n'anya ma meghee obi m nye gị. I biakwute m n'agbanyeghị mmehie m, mee ka m si n'ajọ omume m nile dị ọcha, ị na-ebikwa n'ime m site na Mmụọ Nsọ Gị. Jehova, emeghere m ọnụ ụzọ nke obi m.
Gịnị na-eme ndị nabata Kraịst?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:31 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)